Mataanaha aan guursan kartaa in Seoul, waxa kale oo aad ku socotaan nolosha gaar ah
トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ Mataanaha aan guursan kartaa in Seoul, waxa kale oo aad ku socotaan nolosha gaar ah
Xidhiidhka ka dhexeeya nafta mataanaha waa qaddar dhabta ah ee dhinaca kale in uu soo jiito hab
si aad u hesho [3500 yen qiimaynta Free] in psychics uma baahna oo keliya khasab ku xidhan Adduun.
dabcan, maxaa yeelay, waxa macno in ay la kulmaan mucjisada ah ee dunidan, la midoobo ugu danbeyn soo booqday by-soociddiisa ku meel gaar ah, sidoo kale waa inta badan keenta in guurka. Si kastaba ha ahaatee, ma aha mid ka mid ah in la go'aamiyo, in la kordhiyo iyaga u gaar ah in kasta oo kale, waa maxay booqo kulan ee waqtiga of koritaanka nafta.
Si kastaba ha ahaatee, labada dad kuma filna in la mideeyo marayo kala, waxa ay sidoo kale soo bandhigi doona dacwadda ku socotaan nolol kala duwan. Tani waa, soo horjeeda ma naf mataano ah micnaheeda ma ahan, laakiin waa in aynu u malayno oo kalama ayan hor iman xubno amarka in lagugu xiro Adduun. Intaa waxaa dheer, si ay u naf mataano ah runtii waa mid ka mid ah, waa in ay ka gudbaan dhibka badan. Haddii aad u ma cadda karo, oo waxay gaadhaysaa xataa kala dhawrsan aan Soitogeru nolosha ah ee guurka. In
mataanaha Seoul aan ugu fiican in la xidhan sababta
? 2 qof oo aan la xidhan Ma yeeli karno taas, kaas oo sidoo kale ku xidhan sida aan la kulmay si kor loogu qaado kiiska nafta, 2 dadka la xidhan waxaa loo tixgelin doonaa in la sameeyo sida go'aanka ah in Ilaah oo aan ugu fiican. Ma filayo in la hagaajiyo kasta oo kale oo ay wada isagoo, haddii aad dhinaca farxad dhabta ah ma aan tegi karo, qaddar jeexin lahaa nafta mataano.
? in si ay u noqdaan oo waa
mataanaha Seoul oo ka mid ah in aad raadiso cidda kale, iska tuur fikirrada is-xuddun iyo fikradaha marxalado dhowr ah, waxay u baahan doontaa in la siiyo jacaylka aan shuruud lahayn. Sidaa darteed, waxaad ku kalsoonaan kartaa dhinaca kale xitaa haddii badan kasta oo kale oo midba midka kale si xoog leh u soo jiitaan, sida ama rajaynayaa dhamaystirka taasoo ah meesha kuma filna ee iyaga u gaar ah, laba qof oo raadinaya lammaane in anaanimada lagu qasbi doonaa socday si ka duwan . qayb ka mid ah in aanan rabin in ay arkaan
? Tan iyo
mataanaha Seoul ayaa asal ahaan soocay mid ka mid ah qofkaas waa in jabka eeg, waxaa sheegay in ay joogaan, sida ay jiraan buugii in mid ka mid kale oo iyaga u gaar ah. Sababtan awgeed, aad u aragto in mararka qaarkood qudhaydu in aan in uusan rabin in ay arkaan dhinaca kale. Intaa waxaa dheer, tan iyo inta badan waa in uu leeyahay qayb ka mid ka soo horjeeda, sidoo kale ay jiraan xaalado keeni jabka a sii adkaysan si ay u arkaan qayb ka mid ah in.
Marka aad la kulanto kala la'aan hogaanka guurka dadka u muuqdaan
haddii mataanaha Seoul ka fiirsan oo ahaa maxkamadda si ay nafta ugu kor loogu qaado, aad xanuunka dhadhamin doonaan, sida wakhtiga go'an yahay naftiisa. Waxa intaa dheer in nafta kor loogu qaado sababta oo ah waxa sidoo kale shaqo ka mid ah goob joog dhaawacyada ee xagashada iyo adduun in ay saarnaayeen in nolol hore, waxaa laga yaabaa in xanuun.
in fikirrada sida, oo dhan waa dhibtani ee naftii thinking. Ka dib markii ay marayaan dhibtani waa, doonaa in aad tahay xitaa haddii nafta waa u dhaw in ay ku dhinac-cabbir sare iyadoo ay jirto kala nafta mataano ah, si ay u koraan weyn oo lagu aadanaha.